७ करोड खर्च गरि इन्जिनियरिङ्ग कलेजका लागि तयार गरिएको भब्य भवनमा कुखुरा पालन सुरु ! – नेपाली सूर्य
December 12, 2020 December 12, 2020 Nepali SuryaLeaveaComment on ७ करोड खर्च गरि इन्जिनियरिङ्ग कलेजका लागि तयार गरिएको भब्य भवनमा कुखुरा पालन सुरु !
झापाको विर्तामोडमा इन्जिनियरिङ्ग कलेज सञ्चालनका लागि तयार गरिएको भब्य भवनमा कुखुरा पालन सुरु गरिएको छ । कलेज सञ्चालनका लागि १२ वर्षदेखि लगातार प्रयास गर्दा पनि सम्वन्धन नपाएपछि उक्त भवनमा कुखुरा पालन सुरु गरिएको हो ।
बिर्तामोडको बसपार्क नजिकै एक बिगाह ५ कठ्ठा जग्गानमा ७ करोड खर्च गरि निर्माण गरिएको ४४ कोठे भवनमा अहिले ४ हजार ५ सय लोकल कुखुरा, २ सय टर्की र ७ सय कडकनाथ कुखुरा पालिएको छ ।
१२ वर्षअघि विर्तामोडका १० जना उद्यमी मिलेर ‘पाथीभरा सेण्टर फर एड्भान्स स्टडिज’ नामको इञ्जिनियरिङ कलेज सञ्चालन गर्ने सहमति गरे। उनीहरूले १ विगाह ५ कठ्ठा जमिन खरिद गरे र सुविधासम्पन्न पूर्वाधार तयार गरे । भवन निर्माण ७ करोड रुपैयाँ खर्च भएको संस्थापनक मध्येका युवराज प्रसाई वताउँछन् ।
‘पूर्वाञ्चल इञ्जिनियरिङ कलेजका पूर्वप्रमुख अनुज पराजुलीको सुझाव अनुसार संरचना तयार गरियो’ उनले भने–‘होस्टलसहित ४४ वटा कोठा भएको कलेजको संरचना छ। फिजिक्स र केमेष्ट्री ल्याव, पुस्तकालयसहित आवस्यक सम्पुर्ण पुर्वाधार तयार गरेर पनि कलेज संचालनको अनुमति पाईएन।’
०६९ जेठ १४ गते कलेज स्थापनाका लागि मनसायपत्र पाए पनि केहि समयपछि विश्व विद्यालयले सम्बन्धन दिन नसकिने जनाउ दिएको उनले वताए । पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिन खोजेका सञ्चालकहरू अहिले पनि त्यसको पर्खाइमा छन् ।
कलेज स्थापनाको लागि सम्भाव्यता अध्ययन पनि गरियो । शिक्षा मन्त्रालयबाट स्थलगत भ्रमण गरी टोलीले कलेज सञ्चालनका लागि उपयुक्त रहेको प्रतिवेदन पनि दियो । ‘त्यसपछि ०७२ साउन ८ गते २ लाख ५२ हजार राजस्व पनि तिर्यौ’ उनले थपे–‘पटक–पटक गरेर ८ पटक आसयपत्र नवीकरण गरिसक्यौं। आसय पत्र नविकरण गरेको खर्च नै ४८ लाख रुपैयाँ पुगिसक्यो। तर अहिलेसम्म सम्वन्धन पाईएन।’
कलेज संचालनको सम्वन्धन नपाउने अवस्था आएपछि १० जना साझेदार मध्ये ९ जनाले शेयर फिर्ता लगेकाले अहिले आफु मात्रै वाँकी रहेको प्रसाईं वताउँछन् । ‘सम्बन्धन नपाइने बुझेपछि साथीहरूले शेयर लानुभयो’ प्रसाईंले भने–‘त्यसपछि मैले पनि कलेजलाई खोर वनाउने निर्णय गरे।’
संविधानसभाका सदस्य तथा नेकपा नेता प्रेम गिरीले शिक्षा र स्वास्थ्यमा भएको अस्पष्ट नीतिका कारण लगानीकर्ताहरु यसरी पीडित हुनु परेको वताए । sidhanews
पशुपतिमा ३३ बर्षदेखि लास पोल्नेको कथा-‘बच्चीको ला;स पोल्दा–पोल्दै ढलेछु’